कुलमानको पुनरागमनले जलस्रोतको शेयर बजार उकालो लाग्ला ? - Thoskhabar
लालगढमा गौतम होटल धमाधम निर्माण हुँदै
Top banner 1 ठोस सम्बाददाता - १ घण्टा 0
बर्दिबास, माघ ११ गते । चार दशकदेखि ग्राहकलाई सेवा दिदैं आएको महोत्तरीको बर्दिबासस्थित गौतम होटलले धनुषाको लालगढमा सुविधासम्पन्न होटल धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । युवा...
काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेसँगै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् । उनको पुनरागमनले जलस्रोत कम्पनीहरुमा थप सुधार हुने र शेयर कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले उत्साहित भएका हुन् ।
‘जलस्रोत कम्पनीको शेयर मुल्य अहिले नै प्रत्यक्ष नबढे पनि यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण भैरहेको छ र आगामी दिनमा पनि हुने संकेत देखिएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘यसको शेयर मुल्य आधारभुत हिसावले बढ्नुमा उहाँ आए पनि नआए पनि फरक पर्दैन । तर उहाँले पहिला ऊर्जा क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान र अहिले गर्नसक्ने क्षमतालाई आंकलन गरेर बजारमा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाले आम लगानीकर्ता खुसी भएका हुन् ।’
कुलमानको आगमनले जलस्रोत लगानीकर्ताहरुलाई थप ऊर्जा थपेको छ । तर पूँजी बजार बढ्नमा सबै उनको मात्रै योगदान नभएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । किनभने यसअघिको कार्यकालमा नेपालको उत्पादित विद्युत भारतमा विक्री गर्ने अवधारणा घिसिङले ल्याएका थिए । त्यतिबेला विहार वोर्डसँग सम्झौता पनि गरिएको थियो । यसले गर्दा कतिपय खेर जानसक्ने सम्भावना भएका ऊर्जाहरु भारतमा सप्लाई गर्न सफल हुने लगानीकर्ताले आशा गरेका छन् । जसले गर्दा पूँजीबजारमा पनि यस क्षेत्रको कारोबार राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
यसवाहेक यसअघिको कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जस्ता जलस्रोत कम्पनीमा चासो देखाएका थिए । यसमा कम्पनीको आफ्नो लगानी (ईक्विटी) र बैंकबाट लिन पाउने कर्जा बीचमा धेरै खाडल भएको औंल्याएका थिए ।
कम्पनीहरुले हाल करिब ३० प्रतिशत ईक्विटी र ७० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गरिरहेको अवस्था छ । तर यस्ता कम्पनीको ईक्विटी र कर्जाको अनुपात ५०/५० प्रतिशत गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिँदै आएका थिए । यसरी कर्जालाई केही घटाउने बित्तिकै कम्पनीको खर्च घट्छ । यस्तो खर्च कम हुँदा लगानीकर्तालाई फाइदा हुन जाने शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष अर्याल बताउँछन् । यस्ता समग्र कारणले पनि जलस्रोतमा लगानी गर्नेहरु उत्साही भएको उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)का उपाध्यक्ष आशीष गर्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक फेरिँदैमा यसले बजारमा प्रभाव खासै नपर्ने बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर बजारमा प्रभाव पारे जस्तो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आउँदैएर परिवर्तन नहुने उनको तर्क छ ।
‘उहाँले लोडसेडिङ हटाउनमा भूमिका खेलेको छाप आम जनमानसमा छ । यो राम्रो पक्ष हो ,’ उनले भने,‘ तर उहाँ आएलगत्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचिकृत जलस्रोत कम्पनीहरुको शेयर मुल्य वृद्धिमा खासै फरक परेको छैन ।’
यद्यपि गत बुधबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पदबहालीपछि विद्युत प्राधिकरणको सेवालाई अझ राम्रो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । दोस्रो इनिङ स्वीकार गरेर उनले प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा आएकाले चुनौती स्वीकार गरेको बताएका थिए । उनले अनियमिताबारे गुनासा आएको र सुशासन तथा गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास समेत दिलाएका थिए ।
Previous articleकांग्रेस विवाद: २२ आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले दिए सामूहिक राजीनामा
Next articleरेलको मुआब्जा नपाएपछि बर्दिबासका स्थानीय आन्दोलित
मधेश सरकारले किन घडेरी खोज्दै छ ?
ठोस सम्बाददाता - ८ घण्टा 0
शैलेन्द्र महतो जनकपुरधाम, माघ ११ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो घर बनाउन घडेरीको खोजीमा जुटेको छ । हालै जनकपुरधाम स्थायी राजधानी तोकिए छ । जनकपुर...
बाध्यताले जादैं छु परदेशमा
ठोस सम्बाददाता - ५ महिना 0
राजकरण महतो । काठमाडौं महोत्तरीको बर्दिबासका २३ वर्षीय केदार धमला २ वर्षअघि विदेशमा ठगिएका थिए । बिरानो भूमीमा पाएको दुःख र एजेन्टले झुक्याएको उनी सम्झन...
बेरुजुले आकाश छोयो, प्रदेश २ मा सबै भन्दा बढी अनियमितता
बर्दिबास, भदौं ५ गते । सरकारको बेरुजु रकम सवा ४ खर्ब पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक...
ठोस सम्बाददाता - ७ घण्टा 0
राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ सिटका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै
काठमाडौं, माघ ११ गते । राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ सिटका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै छ । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको...
गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, सिंहदरबारको अधिकार कहिले आइपुग्छ ?
ठोस सम्बाददाता - १ दिन 0
श्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, श्री सारदा देवी थापाज्यू, श्री बिदुरकुमार कार्कीज्यू । महोदय, भनिन्छ, सडक र पुलले ७० प्रतिशत विकाश गाडीमा बोकेर गाउँमा ल्याउँछ । मेरो...
ग्रामिण भेगको विकासका लागि समुदायमा आधारित विकासको मोडेलको खाँचो छ ः पूर्वशिक्षा मन्त्री पोखरेल
खयरमारा, माघ १० गते । ग्रामिण भेगको विकासका लागि समुदायमा आधारित विकासको मोडेलको खाँचो रहेको पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । महोत्तरीको विकट गाउँ...
मालीको भेषमा देखिएपछि सेलिब्रेरेटी सिडिओ महतो फेरि चर्चामा
मटिहानी घटना ः चुरो कुरो के हो ?
युवाले फेर्दै मधेशको विवाह परम्परा
Top banner 1144
Top Banner 290
Top banner 372
Jansampark media Pvt. Ltd. द्वारा संचालित
राम नारायण महतो
राज करण महतो